Nuxurka Dhambaal Beesha Caalamku Usoo Direy Madaxwayne Siilaanyo Iyo Jawaabta Uu Ka Bixiyay |
Nuxurka Dhambaal Beesha Caalamku Usoo Direy Madaxwayne Siilaanyo Iyo Jawaabta Uu Ka Bixiyay
Dalalka beesha caalamka ee taageera nidaamka dimuqraadiyadeed ee Somaliland ayaa madaxweyne Siilaanyo usoo direy dhambaal ay kaga dalbanayaan inuu ka noqdo go’aanka uu ku kala qaaday labada dooorasho isla markaana uu dib ugu dhigey doorashada golaha wakiilada Somaliland,taas oo uu madaxweyne Siilanyana kaga jawaabay dhambaal kale oo uu go’aankiisa ku sharaxayo.
Labadan qoraal ee ay iswaydaarsadeen mudane Siilanyo iyo beesha caalamku oo ahaa kuwo aan loogu talo galin warbaahinta ayaa ilo xog ogaal ahi waxay geeska Africa u xaqiijiyeen in dalalkan oo uu matalayay dalka ingiriisku madaxwayne Siilaanyo dhambaalkooda soo gaadhsiiyeen badhtamihii bishan oo ku beegnayd markii ay soo saareen war-saxaafadeedka ay walaaca kaga muujinayeen go’aanka madaxwaynaha.
Sida ay xogahani u sheegeen Geeska Afirca waxay ay dalalkani madaxwayne Siilanyo ka dalbadeen inuu ka noqdo go’aankiisa oo ay ka digeen inuu dhaawac u geysanayo wada shaqaynta Somaliland iyo beesha caalamka iyo waliba hawl-gallada aqoonsi raadiska ah,maadaamaba oo bay yidhaahdeen ay dib u dhac iyo muddo kordhintu dhaawacayso kalsoonidii beesha caalamku ku qabay hore u socodka Somaliland.
Waxa ay dalalkani sheegeen inaanay niyad ahaan soo dhawaynayn go’aankaas oo sabab u noqon kara saamayn siyaasadeed oo Somaliland lasoo darista.
Ilahan xog ogaalka ahi waxa ay geeska Africa u xaqiijiyeen in madaxwayne Siilanyo ka jawaabay dhambaalka ay usoo direen dalalkani,waxaanuu difaacay go’aanka uu qaatay oo uu carabka ku adkeeyey inuu dan u yahay Somaliland.
Madaxwayne Siilaanyo waxuu sidoo kale ay xogahani sheegeen in dhambaalkiisa eedo ugu jeediyay xisbiyada mucaaradka ah oo uu sheegay inaanay lahayn yool iyo ittijaah siyaasadeed oo cad ,kaas oo isna sida uu xusay qayb ka ah dib u dhaca doorashada baarlamaanka.
Madaxwayne Siilaanyo waxa kale oo uu qoraalkiisa jawaabta ah ku sheegay inay ka go’an tahay inay doorashada madaxtooyadu ku qabsoonto wakhtigii loogu tala galay oo ah march 2017-ka,balse ay doorashada golaha wakiiladu dib u dhacayso duruufo maxali ah awgeed.
Ugu danbayn waxa uu dalalkan uga mahadceliyay taageerada ay siiyaan guud ahaan soomaliland gaar ahaana nidaamka dimuqraadiyadeed ee Somaliland.
Wasiirka arimaha dibada Somaliland oo uu geeska Africa waydiiyay dhambaaladan ayaa waxa uu xaqiijiyay in dhambaaladan ay jiraan,waxaanu ku tilmaamay inuu ahaa dhambaal ay dalalkani ku dhiirigalinayaan inaan la kala qaadin labada doorasho,waxuuse sheegay in madaxwayne Siilanyo ku qancay in la kala qaaado labada doorasho.